जब इन्स्टाग्रामले मित्रहरूलाई 🥇 फॉलोअर्स ▷ 🥇 सुझाव दिन्छ
जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ
मा सुझावहरू इन्स्टाग्राम तिनीहरू ती तत्वहरू मध्ये एक हुन् जुन सामाजिक नेटवर्कमा सब भन्दा दृश्यता गरिन्छ। र, तपाइँ निरन्तर हेरिरहनुभएको छ जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ। यद्यपि यसको सकारात्मक बुँदाहरू भए पनि, प्रयोगकर्ताहरूबाट गुनासो पनि आएको छ, किनकि यी सिफारिशहरू सामाजिक नेटवर्क फिडमा दखलमूलक रूपमा देखा पर्दछन्।
जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ, यो सामूहिक रूपमा गर्छ, जहाँ एक सिफारिश देखा पर्दैन, तर एकै समयमा धेरै; तपाइँ "तपाइँको लागि सिफारिश" शीर्षकको साथ यो देख्न सक्नुहुन्छ। किन यस्तो हुन्छ? यो सरल छ जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ यो खाता संग सम्बन्ध मा त्यसो गर्दछ जुन तपाईं पछि कुराकानी गर्नुभयो। साथै, तपाईंले आफ्नो कुराकानीमा ह्यान्डल गरेका मुद्दाहरूलाई ध्यानमा राख्दछौं। तसर्थ, जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ यो सँधै तपाईंको चासोको विषयहरूमा आधारित हुनेछ।
जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ?: यहाँ फेला पार्नुहोस्!
यो सुविधा इन्स्टाग्रामले लागू गरेको सामाजिक नेटवर्कको विशिष्ट छैन, तर विभिन्न प्लेटफार्महरूमा ह्यान्डल गरिएको छ। त्यस्तै प्रकारले, यो बुझ्छ कि तिनीहरू अवस्थित छन्, विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्क्रियाको साथ सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक इन्स्टाग्राम भएकोले; यो आवश्यक छ कि तरिकाहरू तपाईंको सबैभन्दा ठूलो चासोको खाताहरू पत्ता लगाउनको लागि खडा भयो।
त्यसकारण, जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ यो तपाइँको कुराकानी मा आधारित छ। त्यसो भए तपाई जडान गर्न सक्नुहुन्छ अनुयायीहरू त्यो तपाइँको रूचि सबसे अधिक र ती उही विषयहरू तपाइँसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्। यदि यस इन्स्टाग्राम सुविधाले तपाईंलाई चिन्तित गर्दछ भने, तपाइँले गर्नुपर्ने भनेको "लुकाउनुहोस्" वा "लुकाउनुहोस्" विकल्प पत्ता लगाउनुहोस् र यसलाई क्रमशः चयन गर्नुहोस्।
के यो सुविधा प्रभावकारी छ?
हामीले माथि उल्लेख गरेझैं जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ यो तपाईको रुचिको विषयहरूमा सम्बन्धमा हो। जे होस्, तिनीहरू सँधै यी सिफारिसहरूमा सफल हुँदैनन्, धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि तिनीहरू वास्तवमै उपयोगी हुन्छन् जब उनीहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरू पत्ता लगाउँदछन्। उही बाटोमा, ती तपाइँको फिडमा निरन्तर देखा पर्ने छ, त्यसैले तपाइँको रुचि शीर्षकहरूको लागि खोजी धेरै सरल हुनेछ।
अर्कोतर्फ, यो धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि पूर्ण रूपमा सहज छैन; यसका लागि सुझावहरू वा सिफारिशहरू निस्क्रिय गर्न विकल्प छन्। सामान्यतया, यो एक उपकरण हो कि उपयोगी छ यदि तपाईं सामाजिक नेटवर्क मा लगातार कुराकानी गर्न प्रेम गर्नुहुन्छ। यसको माध्यमबाट, तपाई चाँडै तपाईको रुच शीर्षकहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, साथै साथै तपाईले चिन्नु हुने मानिसहरूलाई पनि।
इन्स्टाग्राम सुझावहरूको उत्पत्ति के हो?
हाल, इन्स्टाग्राम विश्वको सबैभन्दा ठूला र लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक मानिन्छ 1.000 लाखौं सक्रिय उपयोगकर्ताहरूसँग। त्यसकारण यस्तो सुविधालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भयो जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई चासोको खाताहरू सजिलैसँग भेट्टाउन सक्दछ। यी सबै सामाजिक नेटवर्कमा अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट, जुन एक इन्जिन हो जसमा इन्स्टाग्राम प्लेटफर्म प्रबन्ध गरिएको छ।
यो कसरी प्राप्त हुन्छ? इन्स्टाग्राम एल्गोरिथ्मको अपरेशनलाई धन्यवाद। यसको प्रभावकारिता तथ्यमा आधारित छ कि यो डिजाइन गरिएको हो ताकि सबै इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरू सम्पर्कमा रहन र स्थिर कुराकानी कायम राख्न सक्दछन्। यी सुझावहरू फेला पर्न सक्दछ जब एक व्यक्ति तपाईंको प्रोफाइल भ्रमण गर्दछ, तिनीहरूलाई तपाईंको खाता अनुसरण गर्ने प्रयोगकर्ताहरू वा तपाईंको रुचिको विषयहरूमा सम्बन्धित। साथै, यी सिफारिसहरू निम्नमा आधारित छन्:
मनपर्ने र टिप्पणीहरू मार्फत, सामाजिक नेटवर्कमा अन्तरक्रिया।
तपाइँको रुचि को ब्रांड र विज्ञापन।
खोजीहरू तपाईंले गर्नुभयो, गुगलमा तपाईंको खोजीहरूको कुकीहरूलाई पनि ध्यानमा राख्दै।
विषयगत प्रोफाइलहरू जुन तपाईं इन्स्टाग्राममा कुराकानी गर्नुहुन्छ।
तपाईंले हेर्नुहुने सामग्रीको ह्यासट्यागहरू।
तपाईंले पछ्याउनुहुने प्रयोगकर्ताहरूको मनपर्दो।
इन्स्टाग्रामले कुन प्रोफाइल सुझाव गर्दछ?
तपाईंले पढ्नु भएको रूपमा, जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ खातामा बिभिन्न सुविधाहरू लिनुहोस् जुन तपाईंलाई तपाईंको रूचि भएको व्यक्ति भेट्न अनुमति दिनेछ। साथै, तपाईले यस फिचरलाई निरन्तर आनन्द लिन सक्नुहुनेछ तपाईको इन्स्टाग्राम फिडमा यसको तत्काल प्रदर्शनको कारण। अर्कोतर्फ, प्लेटफर्मले प्राय: निर्दिष्ट प्रयोगकर्ताहरू र खाताहरूलाई सुझाव दिन्छ; यहाँ हामी ती सबैलाई हेर्नेछौं!
अब हामीले भर्खर हेर्‍यौं कि इन्स्टाग्रामले लगातार आफ्ना उपकरणहरू र कार्यहरू अपडेट गर्दछ। यी अपडेटहरू मुख्यत: इन्स्टाग्रामको डिजाइनमा आधारित छन्, जुन रुचीका सम्भव विषयहरू हेर्नको लागि अधिक समय खर्च गर्नमा केन्द्रित छ। त्यसकारण तपाईलाई सुझाव दिन सक्ने विषय र मानिससँग नजिकको सम्बन्ध छ जुन तपाईसँग लगातार कुराकानी गर्नुहुन्छ।
र, प्राय जसो प्रयोगकर्ताहरू प्राय: सामाजिक नेटवर्कमा उनीहरूको लोकप्रियता बढाउन र असंख्य अनुयायीहरू प्राप्त गर्न खोज्छन्। यो यसमा आधारित छ, कि इन्स्टाग्राममा सुझावहरूको मुख्य उद्देश्यको रूपमा रहेको छ, साझा रुचि साझा गर्ने खाताहरू सार्वजनिक गर्न, यसैले प्लेटफर्ममा अन्तर्क्रिया बढाउँदछ।
सुझाव गरिएका प्रोफाइलहरू
सामान्यतया, जब तपाईं इन्स्टाग्राममा नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र प्रकाशनहरू गर्नुभएको छैन, यो हो जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ अधिक लगातार। त्यस्तै प्रकारले तपाईको प्रोफाईल भ्रमण गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिले बिभिन्न सल्लाहहरू पनि देख्न सक्नेछन् जुन उनीहरूलाई थाँहा हुन जान्न सक्छन् वा उनीहरूलाई पनी रुचि छ।
अर्कोतर्फ, हामी अन्य प्रोफाइलहरू पनि फेला पार्छौं जुन इन्स्टाग्रामले सुझाव दिन्छ र यी ती खाता प्रयोगकर्ताहरूको हुन् जुन तपाईले अनुसरण गर्नुहुन्छ। तपाईं यसलाई फेला पार्न सक्नुहुनेछ, प्रोफाइल नामको फेदमा, त्यहाँ तपाईंले साझा सम्पर्कहरू देख्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई रूचि हुन सक्छ।
साथै, र अपेक्षित रूपमा, इन्स्टाग्रामले सँधै तपाईंलाई सिफारिस गर्दछ कि तपाईंलाई पछ्याउने प्रयोगकर्ताहरूलाई पछाडि पछ्याउनुहोस् जसले तपाईंलाई पछ्याउँदैनन् र तपाईं पछ्याउनु भएको छैन। उही तरीकामा, इंस्टाग्राममा तपाईंको प्रोफाईल खोजी गर्ने व्यक्तिहरूले पनि सामाजिक नेटवर्कले गर्ने सुझावहरूमा प्रवेश गर्दछन्।
अर्कोतर्फ, तपाईं प्रोफाईलका अन्य प्रकारहरू पनि फेला पार्नुहुनेछ जुन इन्स्टाग्रामले सुझाव दिनेछ। यी ती सम्पर्कहरू वा समूहहरू हुन् जसमा तपाईं अन्य प्लेटफर्महरूमा अन्तरक्रिया गर्नुहुन्छ जस्तै फेसबुक वा ट्विटर। तपाईले पछ्याउनुभएको मानिसका अनुयायीहरूबाट पनि सुझावहरू भेट्टाउनुहुनेछ। साथै, तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनमा तपाईले राख्नु भएको सम्पर्क खाताहरूको फिडमा सुझावहरू पनि देख्नुहुनेछ।
अन्तमा, तपाईं लोकप्रिय प्रोफाइलहरू फेला पार्नुहुनेछ, ती सुझावहरू जुन इन्स्टाग्रामले सुझाव दिन्छ किनकी, जस्तो कि हामीले उल्लेख गर्यौं कि ती प्रोफाइलहरू हुन् जसले धेरै अनुसरणकर्ताहरू हुन् र यसैले इन्स्टाग्रामले व्याख्या गर्दछ कि तपाईं तिनीहरूलाई पछ्याउन चाहानुहुन्छ।
जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ?: कथाहरू!
इन्स्टाग्राम स्थिर अपडेटहरूमा जीवन बिताएर, हरेक दिन नयाँ र बढ्दो नवीन कार्यहरू र उपकरणहरू लिदै विशेषताको रूपमा छ; ती मध्ये एक इन्स्टाग्राम कथाहरू हुन्। अब, इन्स्टाग्राम सुझावहरू प्रदर्शित हुँदैन जब तपाईं कथा देख्नुहुन्छ। जहाँसम्म, प्लेटफर्म एल्गोरिथ्म अझै यहाँ लागू गरिएको छ, प्राथमिकताको आधारमा प्रयोगकर्ताहरूका कथाहरू क्रमबद्ध गरेर जुन तपाईं प्राय जसो बारम्बार गर्नुहुन्छ वा जससँग तपाईंसँग लगातार कुराकानी हुन्छ।
यो हास्यास्पद छ, तर यो वास्तविकता हो। इन्स्टाग्राम एल्गोरिथ्म प्लेटफर्मको असंख्य प्रकार्य र उपकरणहरूमा लागू हुन्छ, कथाहरू तिनीहरूमध्ये एक हुन्। तसर्थ, जब तपाईं पहिलो व्यक्तिको बीचमा देखा पर्नुहुन्छ प्रयोगकर्ताको कथाहरूमा जुन तपाईं बारम्बार गर्नुहुन्न, तपाईं यो जान्न सक्षम हुनुहुनेछ कि यसले अन्तर्क्रिया गर्दछ र तपाईंको प्रकाशित सामग्रीलाई दृश्य बनाउँदछ।
अर्कोतर्फ, इन्स्टाग्राम सुझावहरू सबै प्रयोगकर्ताहरूले मन पराउँदैनन्। यदि यो तपाईंको केस हो र तपाईका मनपर्दो नभएका मानिसहरूका सुझावहरू देखा पर्‍दछ भने, तपाईं यसलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईंले केवल केहि निर्देशनहरू गर्नुपर्दछ जुन हामी छोटो समयमा वर्णन गर्नेछौं।
सायद तपाईं चासो हुनुहुन्छ: कसले मेरो इन्स्टाग्राम कथाहरू हेर्न सक्छ?
अनावश्यक सुझावहरू हटाउनुहोस्!
हामीले माथि उल्लेख गरेझैं जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मित्रहरू सुझाव दिन्छ यो त्यस्तो व्यक्तिमा आधारित हुन्छ जससँग तपाईंले अन्तर्क्रिया गर्नुभयो र तपाईंको रूचिका विषयहरूलाई ध्यानमा राख्नुभयो। यदि त्यसो हो भने, इन्स्टाग्रामका सुझावहरू तपाइँलाई मनपर्दैन, तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउने तरिकाहरू छन्।
सुरु गर्नका लागि तपाईले बोक्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाईलाई सताउने सुझावहरू पत्ता लगाउनु हो। त्यसोभए, तपाईंले आफ्नो भर्खरको खोजीहरूको पहुँच गर्नुपर्नेछ र जाँच गर्नुपर्नेछ कि ती व्यक्ति सूचिमा देखा पर्दछन्। यदि हो भने, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं उनीहरूलाई मेटाउनुहोस्। अर्को, हामी प्रक्रियालाई सजिलो बनाउनको लागि एक पछि अर्को चरण वर्णन गर्नेछौं।
तपाईंको इन्स्टाग्राम खाता पहुँच गर्नुहोस्, त्यहाँ एकचोटि तपाईंले आफ्नो उपकरणपट्टीमा म्याग्निफाइ glass गिलास आइकन पत्ता लगाउनु पर्छ।
त्यसोभए, एक सूची देखा पर्नेछ तपाईंको भर्खरको अन्तर्क्रिया र खोजीहरू देखाउदै।
यदि तपाइँ के चाहानुहुन्छ कि एक खाता को सुझाव तपाईलाई देखा पर्दैन, तपाइँ भर्खर प्रोफाइल को दायाँ स्थित स्थित X थिच्नु पर्छ। यस तरीकाले, सुझाव पूर्ण रूपमा हटाइनेछ।
म कसरी मेरो खाताको दृश्यता हटाउन सक्छु?
अब, यदि तपाई के चाहानुहुन्छ कि अन्य व्यक्तिले तपाईको प्रोफाइल देख्न सक्दैनन्, तपाईले उनीहरूको प्रयोगकर्ता खातामा पहुँच गर्नुपर्नेछ र तीन बिन्दुको प्रतीक पत्ता लगाउनुपर्नेछ; यो प्रोफाइलको माथिल्लो दाहिने कुनामा अवस्थित छ। यसले एक मेनू प्रदर्शन गर्दछ जसले तपाईंलाई त्यो प्रयोगकर्ताको खाता रोक्न अनुमति दिनेछ, तपाईंको कथाहरू र प्रकाशनहरूमा पहुँच हटाईनेछ।
त्यस्तै प्रकारले, त्यहाँ अर्को कम कठोर विकल्प छ जुन तपाईं आफ्नो कथाहरू कल्पना गर्न प्रोफाइल चाहनुहुन्न भन्नेमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ। यो "इतिहास लुकाउनुहोस्" र तपाईं यसलाई प्रोफाइल सेटि inहरूमा अवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ। यस तरीकाबाट, प्रयोगकर्ताले तपाईको फिडमा के प्रकाशित गर्नुहुन्छ देख्न जारी राख्न सक्दछ, तर तपाईले आफ्ना कथाहरूमा के साझा गर्नुहुन्छ।
इन्स्टाग्रामको मतलब के हो
इन्स्टाग्राम भनेको के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ?